Maalin: Janaayo 4, 2020
FeesSPARK ajuurada gawaarida la dhigto ee Magaaladda Istanbul ayaa la kordhiyay 40 boqolkiiba. Muwaadiniintu waxay ka falceliyeen socod-baradka ku dhacay go’aamadii ka soo baxay shirarkii baarlamaanka ee bishii Diseembar 2019 ee IMM. ee la soo dhaafay [More ...]
Ololaha Fiican ee Piano ee Saldhigga Üsküdar
Dhaqdhaqaaq wanaagsan ayaa ka bilaabmay khadka Üsküdar - Çekmeköy. Farshaxaniistaha Barutay Kartal wuxuu ku ciyaaraya piano saldhigga Üsküdar si looga caawiyo carruurta darbi jiifka ah. Ka shaqeynta sidii Khabiir Tababbarka Isboortiga ah u leh Wasaaradda Dhallinyarada iyo Ciyaaraha [More ...]
Qiimaynta ku saabsan dhibaatooyinka Trabzon, kulanka wuxuu ahaa ajandaha minibus la casriyeeyay. Hakanmer Hakan Usta, Madaxweynaha Rugta Darawalada iyo Gawaarida [More ...]
Bilowgii Disembar, haweeneydii ugu horreeysay ee ka shaqeysa baarkin-weyneed ayaa bilaabay inay ka shaqeyso degmada Eskişehir Metropolitan Municipal, taasoo ku dhawaaqday inay shaqaaleysiin doonaan saraakiil dumar ah oo ku sugan barta ay ku dhawaaqdo akoonkooda warbaahinta bulshada. Wuxuu ka bilaabay shaqada Mahmut Pehlivan Street ee Kızılcıklı maalmihii ugu horreeyay. [More ...]
Saldhigga Saddexaad Waxaa Lagu Gaaray Wadada Subl Nardere
Fahrettin Altay - Mashiinka tunnel-ka tareenka ee Narlıdere wuxuu gaadhay saldhigga saddexaad. Waaxda Tareenka Nidaamka Raadinta Dawlada Hoose ee Magaalada Izmir, Bornova Evka 3 - Fahrettin Altay metro line kordhinta Narlıdere'ye [More ...]
Cengiz Construction wuxuu ka dhisi doonaa Croatia 2.7 bilyan ginni oo taariikhi ah Croatia: Khabiirka wargeyska Dünya ee Kerim Ülker wuxuu ku qoray khaanad cinwaankiisu yahay "Cengiz wuxuu dhisi doonaa 2.7 bilyan ginni tareenka Croatia!" Waa kuwan faahfaahinta maqaalka; layna [More ...]
Mısra Öz Sel, oo ku weyday wiilkeeda Oğuz Arda Sel intii lagu guda jiray masiibada tareenka ee magaalada Çorlu 8dii Luulyo 2018, waxay ku dhawaaqday in laba baaritaan la furay iyada oo la aflagaadeeyay Madaxweynaha iyo maxkamadda. Degmada Corlu ee Tekirdag [More ...]
IETT waxay furtay 34 xariiq oo cusub, oo 15 ka mid ahi ay ku yaalliin dhinaca Yurub halka 49 ay ku yaalliin dhinaca Anatolia, si ay u buuxiyaan baahiyaha gaadiidka ee dadka deggan Istanbul. IETT waxay higsaneysaa inay siiso adeegyo gaadiid oo raaxo leh dadka deggan Istanbul. Gaadiid ku taga Marmaray [More ...]
Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha dhaqaalaha ayaa ku dhawaaqday in dalabka tareenka dijitaalka ah dib loo dhigay 30 June 2020. Shalay Istanbul iyo Ankara magaalooyin badan, gaar ahaan gaadiidleyda, Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha 'Tacsida Digital' [More ...]
Wasaaradda waxay cadeyneysaa Xiriirka Ganacsi ee shilka inuu la leeyahay TCDD
Corlu train kiiska xasuuqa ka dib jawaabta ay wasaaradu ka bixisay soo jeedinta, khabiirka sameeyay kiiska Bekir Binboğa, Sıddık Yarman iyo Mustafa Karaşahin'e 14 qandaraasyo kala duwan oo la tashi ah oo ah 1 milyan iyo 40 kun [More ...]
Dowladda Hoose ee Magaalada Kocaeli, oo hirgelisay mashruuc fududeynaya isu socodka gaadiidka iyo u fududeynta gaadiidka muwaadiniinta, ayaa furmaya Izmit Salim Dervişoğlu Street, kaas oo lagu balaariyay 2 × 2 waddo oo laba jibaaran. Ikhtiyaar u ah Wadada D-100 [More ...]
İzmir Dawlada Hoose ee Magaalo Weynaha Waxaa loo Sameeyay dhigashada Baabuur dhigashada loogu talagalay baabuurta xirashada
Izmir degmada Metropolitan, ugu horeeyay ee noociisa ah u saxiixay mashruuc la la dhigto baabuurta duugga ah aasaasay Turkey. Meesha la dhigto ee baabuurta la dhigto oo ku taal Menemen ayaa noqon doonta xalka dhibaatada ballaaran ee magaalada. Dowladda Hoose ee Magaalada Izmir, waaya aragnimo ku leh magaalada oo dhan [More ...]
Khabiirada Shilalka tareenka ee luorlu waxay bixiyaan 14 milyan oo TL ah 1ka Shaqooyin ee wadahadalka ah
Shilka tareenka ee Çorlu ayaa loo magacaabay khabiir ku xeel dheer Mustafa Karaşahin Sıddık Binboğa Yarman 14 shaqo oo wadatashi oo gooni ah oo loogu talagalay Wasaaradda Gaadiidka ayaa u muuqatay inay heshay 1 milyan 40 kun ginni. Meel ku Dhig Runta Dheer [More ...]